के दाहाल प्रम ओलीका मुनिम हुन् ? | रुपान्तरण
के दाहाल प्रम ओलीका मुनिम हुन् ?
१० मंसिर २०७६, मंगलवार १२:४४
काठमाडौं । देशको एकमात्र ‘ठूलो’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पार्टी एकता र नेतृत्वको आपसी समझदारी संकटमा पुगेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको सहमतिको मसि सुक्न नपाउँदै आपसी विश्वासमा संकट पैदा भएको छ ।
दुवै पार्टी अध्यक्ष बीच समान वरियता कायम गर्दै दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिने सहमति भएको थियो । एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्को अध्यक्षले पार्टी नेतृत्व गर्ने सहमति भए अनुसार कार्यकारी भूमिका पाएपछि दाहालले पार्टी संचालनलाई तीब्रता दिएका थिए ।
प्रचण्डको नेतृत्व अस्वीकार
तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सिनियर र कार्यकारी अध्यक्ष पनि भएको दावी गरेका छन । पाँच वर्ष आफू प्रधानमन्त्री भइरहने र पार्टीको लगाम पनि आफनै हातमा रहने ओलीको बोलीले नेकपामा संकट निम्त्याएको हो । कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारणहुने भूषण दाहालको नियमित कार्यक्रम फायरसाईडमा अन्तर्वार्ता दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल जुनियर भएको स्पष्ट खुलासा गरे ।
अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई प्रथम अध्यक्ष भएको घोषणा समेत गरे । सिनियोरिटीको हिसाबले म सिनियर अध्यक्ष हो । उहाँ (दाहाल) अर्को अध्यक्ष हो । पहिला मैले ‘मात्रै’ बैठकको अध्यक्षता गर्थें । अब उहाँले ‘पनि’ गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीं मैले पनि गर्छु, उहाँले पनि गर्नुहुन्छ ।’
किन फेरियो ओलीको बोली ?
उपचारका लागि प्रम ओली सिंगापुर जानु अघि भएको छलफलका आधारमा पार्टी सचिवालयले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले नै बैठक अध्यक्षता गर्दै आएका थिए ।
पार्टी एकीकरण हुने बेला र त्यसपछि पनि अध्यक्ष दाहालले दुवै अध्यक्षको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । एउटा अध्यक्षले सरकार र अर्को अध्यक्षले पार्टी नेतृत्व गर्ने सहमति भए अनुसार कार्यकारी भूमिका पाएपछि दाहालले पार्टी संगठनको संचालनलाई तीब्रता दिएका थिए । नेता तथा कार्यकर्तासँग बाक्लो भेटघाट थालेका दाहालको सांगठनिक सक्रियता देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोली फेरेका हुन ।
सरकार र पार्टीको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन दुई अध्यक्षबीच कार्य विभाजन गरिना साथै अहिले फेरी संशय पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री हुने अध्यक्षले कार्यकारी भूमिका सहितको अर्को अध्यक्षसँग परामर्श गर्नु पर्ने समझदारी भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफू वरिष्ठ भएको दावी गर्दै समझदारी पालना नगर्ने जनाउ दिएका छन ।
यसैबीच ओलीको ‘एपेन्डिसाइटिस’को शल्यक्रिया गरिएको छ । मंगलबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उनको शल्यक्रिया गरिएको हो ।
सोमबार राति पेट दुखेकाले उनलाई मंगलबार बिहान ९ बजे शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो । प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह, डा. रमेशसिंह भण्डारीलगायतको टोलीले उनको शल्यक्रिया गरेको हो । उनलाई केही दिन अस्पतालमै राखिने भएको छ ।